Ny tohodrano AirPower dia afaka mitohy amin'ny fampandrosoana | Vaovao IPhone
Herintaona lasa izay dia nanambara ofisialy izany i Applenofoanana ny fivoaran'ny toby fiantsoana antsoina hoe AirPower, toby fiampangana izay natolotra herintaona sy tapany talohan'izay, saingy mbola tsy naheno hatramin'ny nanombohany. Ity famahanana fototra ity, izahay avela handefa fitaovana hatramin'ny 3 mametraka azy ireo amin'ny toerana rehetra eo amin'ny fotony.
Ho fanampin'izany, naseho tamin'ny efijery iPhone izy, ny haavon'ny fiasan'ny fitaovana rehetra ankehitriny izany dia teo am-pototry. Nilaza i Apple fa noho ny olana amin'ny fiparitahan'ny hafanana ateraky ny fotony, ary tsy mihoatra ny fenitry ny fiarovana azy, dia nanapa-kevitra ny hanafoana ilay tetikasa izy.
Araka ny tsaho farany, Tsy nanafoana tamim-pahavitrihana ny dock charge i Apple ary manohy miasa izy. Araka ny tsaho farany, ny injenieran'ny Apple dia miasa amin'ny toby famahanana izay manaparitaka ny hafanana amin'ny fomba mahomby kokoa, milaza ihany koa izy ireo fa efa manana prototype izay anaovany andrana samihafa.
Apple dia nampiditra ny dock charge amin'ny volana septambra 2017, amin'ny hetsika iray ihany hanolorana ny iPhone X. Tamin'io hetsika io ihany dia nanambara izy fa hahatratra ny tsena amin'ny faran'ny taona 2018, fa araka ny fantatsika rehetra dia tsy tonga izany. Tamin'ny volana martsa 2019 dia nanambara ampahibemaso ilay orinasa fa noterena hanafoana ny fivoaran'ny toby famerenam-bola izy ireo noho ny olan'ny fanafanana, milaza fa nanolo-tena hatrany izy hampiroborobo ny traikefa an'ity karazana fiampangana ity.
Volana vitsivitsy lasa izay, Ming-Chi Kuo dia nanambara fa ny iray amin'ireo vokatra vaovao hatombok'i Apple amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2020 dia fototra famahanana finday kely kokoa, angamba miaraka amin'ny fanohanana fitaovana roa. Tamin'ny voalohany, io teny io dia hitohy na dia mety niova aza noho ny areti-mandringana, na dia toa tsy izany aza no nitranga tamin'ny iPad Pro vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny tohodrano AirPower dia afaka mitohy amin'ny fampandrosoana
Google koa dia manafoana ny hetsika an-tserasera ho an'ny mpamorona